Amazwi anomdla ngokuphathelele abantu base-Ireland baseMerika
Imiba Uhlanga kunye nobuhlanga
Uvavanye ulwazi lwakho lwembali yase-Ireland yaseMerika ngale mibuzo
Zingaphi iinkcukacha kunye namanani owaziyo malunga nabantu base-Ireland baseMerika? Ngaba uyayazi, umzekelo, ukuba uMashi nguNyanga yeRifa leMveli yase-Ireland ? Ukuba kunjalo, ungoqela elincinci lamaMerika.
Kubantu abambalwa abantu bayazi ukuba kukho inyanga enjalo, makungabikho yinyanga leyo ewela ngayo, ngokutsho kwe-American Foundation ye-Irish Heritage. Nangona inani leziganeko zamazwe ngamazwe lwenzeka ngenhlonipho yeSt.
Usuku lukaPatrick, ukubhiyozela i-Irish yonke inyanga ka-Matshi akukafaneli kube yinto yokusebenza rhoqo.
I-American Foundation ye-Heritage Heritage ijolise ukwenza inkcubeko yelifa lemveli, kuqala ukubhiyozelwa ngowama-1995, njengoko ithandwa njengeNyanga yeMbali yeMnyama okanye iNyanga yeGugu yamaSpanishi . Iqela lize libonelele ngeengcebiso malunga nendlela yokwenza uluntu lube lunomdla wokubhiyozela ukugcinwa kweenyanga, ezifana nokuqhagamshelana noonomathotholo kunye nezikhululo zikamabonwakude, imibutho yase-Irish-American kunye noorhulumente karhulumente.
Kodwa isiseko sele sineziko elilodwa kwikona-i-US Census Bureau. Unyaka ngamnye, i-ofisi iyavuma iNyanga yeRifa leMveli yase-Irish ngokukhupha amaqiniso kunye namanani ngabantu base-Ireland.
Beka ulwazi lwakho ngabantu base-Ireland nabamaMerika ukuvavanya.
Amanxusa ase-Ireland eMzantsi Afrika
Inyani okanye inkohliso: AmaMerika athabatha okhokho base-Irish ngaphezu kweyiphi na.
Impendulo: Amanga. Nangona i-Oktoberfest ayikho indawo ekhangelwe njengeSt.
Usuku lukaPatrick e-US, abaninzi baseMelika bathi bangowesizwe saseJamani kunabanye. Isi-Irish ngowona wesibini uhlanga oluthandwayo lwabantu baseMerika. Phantse izigidi ezingama-35 zakwaMerika zithi zinelifa le-Irish, ngokubhekiselele kubalo. Ezi zihlandlo ezisixhenxe zabantu base-Ireland, okuqikelelwa kwizigidi ezi-4.58.
Apho i-Irish Americans Live
Nguwuphi na umzi kwipesenti enkulu yama-Irish Amerika-eNew York, eMassachusetts okanye e-Illinois?
Impendulo: eNew York. Urhulumente unamaqela ase-Irish-Amerika angama-13 ekhulwini. Ehlabathini lonke, abantu base-Irish-Amerika bangama-11.2 ekhulwini. Isixeko saseNew York sinokuhlukana kokusingathwa kwintlanganiso yokuqala yoSt. Patrick . Kwenzeke ngo-Matshi 17, 1762, kwaye kwavela amajoni ase-Irish kwimikhosi yamaNgesi. Ngekhulu le-5, uSt. Patrick wazisa ubuKrestu kwiIreland, kodwa usuku lokuhlonipha kwakhe luye lwadibana nantoni na ehlobene ne-Ireland.
Abafuduki base-Irish ukuya eMelika
Bangaphi abafuduka baseIreland baba ngabemi baseUnited States ngo-2010-50,000, 150,000 okanye 250,000?
Impendulo: Ngokuchanekileyo i-144,588, okanye malunga nama-150,000.
Ubutyebi Phakathi kwama-Irish American
Ngaba ingeniso yemindeni yomlambo yaba-Irish-American efana, ephantsi okanye ephakamileyo kunabo bonke abaseMelika?
Impendulo: Imindeni ephethwe yi-Irish America inemali engenamaphesenti angama-56,363 ngonyaka-ngaphezu kwe $ 50,046 kwimindeni yase-US ngokubanzi. Akumangalisi ukuba abantu baseIreland baseMerika bafumana ubuhlwempu obuphantsi kunamaMerika ngokupheleleyo. Iipesenti ezi-6.9 kuphela zezindlu eziholwa ngabakwa-Irish zaseMelika zafumana inqanaba lentlupheko, ngelixa i-11.3 ekhulwini yemindeni yaseMerika yenze njalo.
Inyani okanye inkohliso: Abantu base-Ireland baseMerika bahle kakhulu kunabantu base-US bonke ukuba babe ngabafundi abaphumelele kwiikholeji.
Impendulo: Yinyaniso. Ngoxa ama-33 ekhulwini ase-Ireland aseMerika 25 okanye ngaphezulu afumana ubuncinane be- bachelor degree kunye ne-92.5 ubuncinane idiploma yesikolo esiphakamileyo, kuba ngamaMerika ngokubanzi, amanani alinganayo angama-28.2 eepesenti kunye nama-85.6 ekhulwini, ngokulandelana.
Yiyiphi intsimi abangama-America aseMerika abasebenza ngokubanzi-ukuhamba, ukuthengisa okanye ukulawula?
Impendulo: Ininzi, iipesenti ezingama-41, zase-Ireland zaseMelika zisebenza ekuphatheni, imisebenzi engcali kunye nemisebenzi ehambelana nayo, imibiko yoluntu. Okulandelayo kumgca ukuthengisa kunye nemisebenzi yeofisi. Ngaphezulu nje kweepesenti ezingama-26 zase-Ireland zaseMelika zisebenza kule ntsimi, zilandelwa ngamaphesenti angama-15.7 kwimisebenzi yeenkonzo, i-9.2 ekhulwini kwimveliso, ezokuthutha kunye nezinto ezihambayo, kunye ne-7.8 ekhulwini ekwakhiweni, ekukhutsheni, ekugcinweni nasekulungiseni imisebenzi.
Inyani okanye inkohliso: Abantu base-Ireland baseMerika badala kunabo bonke abantu base-United States.
Impendulo: Yinyaniso. Ngokwe-2010 kubalo, umyinge waseMelika uneminyaka engama-37.2 ubudala. Umyinge wase-Ireland waseMelika uneminyaka engama-39.2 ubudala.
UMongameli omkhulu wase-Ireland
Nguwuphi umongameli wase-United States onelungelo lelifa le-Ireland-uBarack Obama, uJohn F. Kennedy okanye u-Andrew Jackson?
Impendulo: UJohan F. Kennedy waphula isilayila ngo-1961 ngokuba ngumongameli wokuqala wase-Irish-American Catholic. Kodwa wayengengumongameli onxulumene ngqo ne-Ireland. Ngokutsho kwe "Christian Monitor Monitor," u-Andrew Jackson unalo lo mbandela. Bobabini abazali bakhe bazalwa kwiLizwe laseArimrim, e-Ireland. Bafudukela e-United States ngo-1765, iminyaka emibini ngaphambi kokuzalwa kwakhe.
Inkcazo yoBuchule kunye nePolisa ngobuqhetseba ngokumelene ne-Hispanics
Imizekelo ye-Xenophobia: Ukususela kwi-Profiling Profiling to Internation
Yintoni Eyona Ntsi ngiselo Yendlela Ebonisa Ngayo?
Xa ukuBhaliswa kobuhlanga kuSebenzi
Ngaba Ukutshintsha Ubuhlanga Kukhona?
Umehluko phakathi kweSpanishi neLatinino
Amazwi anomdla malunga nama-Asiya aseMerika
Ama-5 ase-American American Stereotypes kwiTV nakwifilimu efuna ukufa
Ginkgo Biloba Igalari yeSithombe - Igalari yeMaidenhair neGinkgo Umfanekiso
Ama-albhamu akwiiKrisimesi ze-rock
Kutheni ungafanelanga ukuphatha i-Mercury
Amandla okuPhilisa kwengqondo nokubonakalisa
Uhlobo lwe-Aries kunye ne-Virgo Love Compatibility
Hillary kunye namaNtsundu amnyama: Ukunyaniseka
Iifomati zesiFrentshi kunye neeMoods
Ukuphela kweRiphabhliki yaseRoma
Imfazwe yasePalo Alto
I-Monohybrid Cross: I-Genetics Definition
Intliziyo ikhutshwe kwi-Hard Rock ukuze ijabulele 'Impumelelo yePops yama-80
Imibuzo yobuKristu eqhelekileyo: Ndingumfana nje, Ngoko Kutheni Ndifanele Ndibe Neyeshumi?
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngamabhethri Emoto
Indlela yokujongana nePlanzi ngokuchanekileyo ngaphandle kwe-"Poked, Jab Stroke"
Sisiphi Isivakalisi Esincinci?